About Apollo – Wecaremyanmar
WeCare ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဆင့်မှီ စောင့်ရှောက်မှုများရရှိနိုင်ရန် အပိုလိုဆေးရုံ၏ မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
၁၉၇၁ခုနှစ်တွင် Dr. Reddy သည် ဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်း ဘော်စတွန်မြို့တွင် ဆေးကုသနေရာမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သူသည် နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်သော ဆေးရုံများဆောက်လုပ်နိုင်တဲ့ မြေနေရာကွက်လပ် များစွာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဆေးကုသမှုတစ်လျှောက်မှာ နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း ဆေးကုသဖို့ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများလည်းမရှိ၊ နိုင်ငံခြား မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့လည်း မတတ်နိုင်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖူးသည်။ ထိုသို့လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုသည် Dr. Reddy အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိစေရမည်ဟု စိတ်အားထက်သန်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိန္ဒိယတွင် ပထမဆုံးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးရုံလေးကို စတင်တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အပိုလိုဆေးရုံများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူနာတစ်ယောက်ချင်းစီကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်စေရန်နှင့် ပြည်သူလူထုထံသို့ ပညာရေး၊ သုတေသနရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးတွေကို ခေါ်ဆောင်လာပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းကြမည်။ နှစ် (၃၀) အတွင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများစွာကို ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ အပိုလိုဆေးရုံသည် အိန္ဒိယမှာ အကြီးမားဆုံး ဆေးရုံ ဖြစ်ရုံသာမက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ကျော်မှ လူ၄၂သန်းကျော်ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အပိုလိုဆေးရုံသည် အာရှတွင်သာမက ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိမှာ ကုတင် ၁၀၀၀၀ ကျော်ဆန့်သော ဆေးရုံပေါင်း (၇၀) ရုံ၊ ဆေးခန်းပေါင်း ၂၂၀၀ကျော်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ရောဂါစစ်ဆေးမှုဓာတ်ခွဲခန်း စင်တာပေါင်း (၁၀၀) ကျော်၊ နိုင်ငံ(၉)နိုင်ငံတွင် Telemedicine unit (၁၁၅) ခု၊ ကျန်းမာရေးအာမခံများ၊ ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ clinical trial (ဆေးစမ်းသပ်သုတေသနပြုလုပ်မှုများ)၊ အရေပြားနှင့်ပတ်သက်ပြီးသုတေသနများ၊ stem cell နှင့် မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိသည်။
အပိုလိုဆေးရုံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ယနေ့ထက်တိုင် နှစ် (၃၀) ကျော်ကြာ အကောင်းဆုံးဆေးရုံတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ အပိုလိုအုပ်စုရဲ့ အောင်မြင်မှုအနေဖြင့် JCI international quality accreditation ကို ရရှိခဲ့ပြီး နှလုံးဌာန၊ အရိုးဌာန၊ အာရုံကြောဌာန၊ အရေးပေါ်ဌာနများ၊ ကင်ဆာဌာနနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးကုသမှုများတွင်လည်း အောင်မြင်မှုများရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများဖြင့် ကုသပေးခြင်း၊ robotic နည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းနှင့် လူနာများကို နွေးထွေးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ Apollo pioneered Tender Loving Care (TLC) ဆောင်ပုဒ်အရ လူနာတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ဂရုစိုက်ပေးခြင်း ကို အလေးထားပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းဟာ လူနာတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် မိမိတို့မိသားစုဝင်ကဲ့သို့ ဂရုစိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Apollo ဆေးရုံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူရန် အကောင်းဆုံးသော ဆေးရုံအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်။5star အခန်းတွေ၊ အရသာကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်သောအစားအစာတွေ၊ အိမ်နဲ့ဝေးနေပေမယ့် လူနာအတွက် Apollo ကို အိမ်အနေနဲ့ခံစားမှုရအောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်
အပိုလိုဆေးရုံအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အနောက်နိုင်ငံများသို့ ဆက်လက်ဖြန့်ကျက်ကာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ သန်းတစ်ထောင် ခန့်သော လူနာများကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အပိုလိုလိုဆေးရုံသည် လူအများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ရရှိလာသည်။ အပိုလိုဆေးရုံ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် commemorative postage stamp အပိုလိုနာမည်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုတံဆိပ်ခေါင်းကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ အပိုလိုဆေးရုံကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Dr. Prathap C Reddy ကိုလည်း အိန္ဒိယအစိုးရမှ second highest civilian award “Padma Vibhushan” ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Dr. Prathap C Reddy စတင်ခဲ့သော အပိုလိုဆေးရုံအနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ထိရောက်သော ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသမှုများ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော ဘဝကိုရရှိစေရန်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအထိသို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုလိုဆေးရုံ မြန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ( Apollo Information Centre ) မှ ဆေးကုသမည့် လူနာများအတွက် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
✜လူနာ၏ ဆေးစစ်ချက် အဖြေများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်း
✜ လူနာ၏ ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော ဆေးမှတ်တမ်းများကို ဆေးရုံသို့ ပို့၍ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများထံ ပြသပြီး ကုသမည့်နည်းလမ်း၊ ကုသရန် ကြာမြင့်ချိန်၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစားရိတ် နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးပေးခြင်း။
✜မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုအပ်သော ကြိုတင်ဆေးစစ်ချက်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
✜ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
✜နိုင်ငံ ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားပေးခြင်း။
✜ လေယာဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးခြင်း။
✜အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လေယာဉ်ကွင်းမှ တည်းခိုရမည့်နေရာအထိ လူနာအကြိုအပို့ စီစဉ်ပေးခြင်း။
✜ ဆေးရုံအနီးတွင် နေထိုင်နိုင်ရန် တည်းခိုးခန်း၊ ဟိုတယ် စီစဉ်ပေးခြင်း။
✜ သီးခြား စကားပြန်လိုအပ်ပါက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
✜ ဆေးကုသမှုပြီးဆုံး၍ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာပြီးနောက် လစဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးနေကျ ဆေးစစ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများထံသို့ ပို့ပေး၍ ညွှန်ကြားချက်များ ရယူပေးခြင်း။
✜ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများမှ မြန်မာပြည်သို့ မကြာခဏလာရောက်၍ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
✜အပိုလိုဆေးရုံ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသမျှအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုအပ်ပဲ အပိုလိုဆေးရုံ၏ International Patients များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးကုမှုကုန်ကျစားရိတ်အတိုင်းသာ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
“ ကရုဏာရှေ့ ထားကုသပေးတာ အပိုလိုပါ၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝအတွက် အပိုလိုဆေးရုံနဲ့
Undaunted and unfazed by the obstacles faced, Apollo Hospitals opened its doors in 1983 and ever since nurturedagoal which read as “Our mission is to bring healthcare of international standards within the reach of every individual. We are committed to the achievement and maintenance of excellence in education, research and healthcare for the benefit of humanity”.In the 30 years since, it has scripted one of the most magnificent stories of success that India has seen. Not only is the Apollo Group one of the largest integrated healthcare groups in the region, it also did successfully catalyze the private healthcare revolution in the country. Apollo today has made every aspect of their lofty missionareality. Along the way the journey has touched and enriched 42 million lives who came from 120 countries.
Apollo Hospitals was the forerunner of integrated healthcare in Asia, as well as globally. Today, the group’s futuristic vision has ensured that it has been inaposition of strength at every touch point of the healthcare delivery chain. Its presence encompasses over 10,000 beds across 64 hospitals, more than 2200 pharmacies, over 100 primary care & diagnostic clinics, 115 telemedicine units across9countries, health insurance services, global projects consultancy, 15 academic institutions andaResearch Foundation withafocus on global clinical trials, epidemiological studies, stem-cell and genetic research.Over the past three decades Apollo Hospitals’ transformative journey has forgedalegacy of excellence in Indian healthcare. The Group has continuously set the agenda and led by example in the blossoming private healthcare space. One of Apollo’s significant contributions has been the adoption of clinical excellence as an industry standard. Apollo pioneered the concept – the group was the first to invest in the pre-requisites that led to international quality accreditation like the JCI and also developed centres of excellence in Cardiac Sciences, Orthopaedics, Neurosciences, Emergency Care, Cancer and Organ Transplantation. Along with excellence the Apollo philosophy rests on the pillars of technological superiority,awarm patent- centric approach,aclear and distinct cost advantage andaedge in forward- looking research. Apollo’s spectacular success rests on sustained commitment and investments in each of these pillars.The Group continues to break new ground in adopting new technology. From leveraging new age mobility, to getting futuristic equipment Apollo has always been ahead of the curve. Currently, the group believes in the tremendous potential of robotics and is investing heavily in making itareal and robust option for all. Apollo pioneered Tender Loving Care (TLC) and it continues to be the magic that inspires hope, warmth andasense of ease in the patients.Apollo started out with the promise of bringing quality healthcare to India ataprice point that Indians could afford. The cost of treatment in Apollo wasatenth of the price in the western world. Today as the group charts out its roadmap to take healthcare toabillion, the focus on drivingastrong value proposition remains constant.Apollo Hospitals has taken the spirit of leadership well beyond business metrics. It has embraced the onus of keeping India, healthy. India could soon become the heart disease capital of the world if the surge of lifestyle diseases goes unchecked. Apollo Hospitals has its agenda full in taking steps to avoid this. Recognizing that the risk of heart disease can be significantly reduced, even reversed, Apollo Hospitals launched the pathbreaking Billion Hearting Beating,acampaign that empowers Indians with the knowledge to fight the common adversary – heart disease.Apollo Hospitals has always strongly believed in social initiatives that help transcend barriers. In keeping with this, the group has started several impactful programmes in this area.
One among these initiatives is SACHi (SaveaChild’s Heart Initiative) –acommunity service initiative with the aim of providing quality pediatric cardiac care and financial support to children from underprivileged sections of society suffering from heart diseases.
Apollo also runs the SAHI (Society to Aid the Hearing Impaired) initiative to help poor children with hearing impairment, and the CURE Foundation which is focused on cancer screening, cure and rehabilitation for those in need. In the area of Cancer care Apollo has also joined hands with Yuvraj Singh’s YOUWECAN to organize massive cancer screenings. Apollo regularly conducts comprehensive health screening camps across the nation. The Group actively leverages its telemedicine and mHealth capabilities to take its screening programmes to even remote corners of the country.
Apollo’s remarkable story has captured India’s attention. For its service to the nation, the Group was felicitated with the honour ofacommemorative postage stamp bearing its name. For his untiring pursuit of excellence in healthcare, Dr. Prathap C Reddy, was bestowed with the second highest civilian award, the ‘Padma Vibhushan’, by the Government of India.Recently Apollo Hospitals celebrated its 30th year. The Group, led by Dr. Prathap Reddy, reaffirmed its goals and redefined their focus. With ambitious projects like Apollo Reach Hospitals,astrong focus on preventive healthcare and an unabated commitment to nurture excellence and expertise in healthcare, Apollo Hospitals envisions foranew horizon –afuture where the nation is healthy, where its people are fighting fit, and India emerges as the preferred global healthcare destination.